Enweghị kwarantaini: Abu Dhabi mepere maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa UAE » Enweghị kwarantaini: Abu Dhabi mepere maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Nke a bụ nnukwu nganga n'ihu ka UAE na -akwado ịnabata EXPO 2020, Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix na ọtụtụ ihe omume ụwa niile n'ọnwa ndị na -abịa.
Abu Dhabi wepụrụ mkpapụ iche maka ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi ọrịa.
Abu Dhabi na -atụ anya mmụba dị ukwuu na -achọ njem na Emirate.
Etihad Airways kwadebere maka nkwalite njem na Abu Dhabi.
Gọọmentị Abu Dhabi kwupụtara mwepụ nke iche maka ndị njem ọgwụ mgbochi ọ bụla si mba ọzọ na -abata na Emirate.
Etihad Airways, ụgbọ elu mba UAE, dị njikere maka nkwalite njem na Abu Dhabi na -eso ọkwa gọọmentị.
Ndị njem nwere ọgwụ mgbochi ọfụma (yana ọgwụ mgbochi ndị World Health Organisation kwadoro) nwere ike isi mba niile bịa na -enweghị mkpa ịpụ iche. Ndị njem niile ga -achọ nnwale PCR n'ime awa 48 ọpụpụ, ule mgbe ị bịarutere na ịnwale ule na ụbọchị ahọpụtara dabere na obodo ha si. Otú ọ dị, ndị njem a na -agba ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị ịgbaso iwu dịka ebe ha si abịa.
Tony Douglas, onye isi oche ndị isi, Etihad, kwuru, sị: “A kwadebere akụkọ akụkọ a nke ọma ịmalite ịnabata ụwa ọzọ Abu Dhabi. Anyị na -atụ anya nnukwu mmụba nke ndị njem nleta na ndị enyi na ndị ikwu sitere gburugburu ụwa na -achọ. Nke a ga -enyekwa ndị bi na UAE mgbanwe dị ukwuu na udo nke uche mgbe ha na -eme njem n'ụwa niile.
“Emirate ewepụtala otu mmemme ahụike ọha kacha mma n'ụwa iji chekwaa ọnụ ọgụgụ ndị nwere oke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana usoro teknụzụ nwere amamihe dị ka ngwa Al Hosn iji hụ na nchekwa nke ndị bi na ndị ọbịa.
"Nke a bụ nnukwu nganga n'ihu ka UAE na -akwado ịnabata EXPO 2020, Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix na ọtụtụ ihe omume ụwa niile n'ọnwa ndị na -abịa.
“Etihad na -arụ ọrụ ugbu a na njem ndị njem 65 na otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri kacha nta na nke na -adigide n'ụwa. Anyị na-atụ anya ịnabata ndị ọbịa anyị na Abu Dhabi na Etihad iji nwee ọ enjoyụ ebe njedebe ụwa a-alaeze ukwu na isi obodo anyị nwere nganga ịkpọ ụlọ anyị. ”
Nkwado Etihad Wellness bụ nke ewepụtara iji nyere aka belata mgbasa nke COVID-19 na-efe efe na Etihad. Etihad bụ ụgbọ elu mbụ n'ụwa nyere ndị ọrụ ụgbọ mmiri ya ọgwụ mgbochi n'ụzọ zuru oke. Etihad chọkwara 100% nke ndị njem ya ka ha gosi ule PCR na -adịghị mma tupu ha abanye na nchekwa gburugburu ebe ọkụ, nke amatala ugbu a dị ka nke kacha mma n'ụwa.
Ụgbọ elu emejuputala mmemme ịdị ọcha na ịdị mma yana na -eme ụkpụrụ ịdị ọcha kachasị elu n'akụkụ niile nke njem ndị ahịa. Nke a gụnyere nri, ụgbọ elu na ime ụlọ nhicha nke ọma, nbanye, nyocha ahụike, ịbanye, inflight, mmekọrịta ndị ọrụ, ọrụ nri, ịpụ na njem ụgbọ ala, n'etiti ndị ọzọ.